I-CASH APP AYIKWAZI UKUSAYINA KWESI SIXHOBO -UNGAZILUNGISA NJANI - IBHLOG
I-Cash App ayikwazi ukuSayina kwesi sixhobo -Ungazilungisa njani
Zininzi izinto ezisekwe kwimali ephathekayo ethumela kwaye yamkele izicelo ezikuvumela ukuba uthumele, ufumane, kwaye uthumele imali ngokuthe ngqo kwiselfowuni ngokulula nakweyiphi na imeko xa ungxamile.
Esinye isicelo esinjalo esongeza njengenye yezona zikhuselekileyo kunye neyona ilula yiCash App. Ngelishwa, ukungakulungeli ukungena ngemvume kulo naliphi na inqanaba sesinye sezihlandlo ezicaphukisayo ezanele ukonakalisa yonke imini yethu. Nokuba ungazama ngenkuthalo kangakanani, imicimbi yemiqondiso yeCash App yenzeka amaxesha ngamaxesha, kwaye xa isenzeka ngeCash App, ithathelwa ingqalelo ngokungathandekiyo. Kungenxa yokuba, ngaphandle kokungena kwiCash App, awuyi kuthumela, ufumane, kanye nemali yokucela imali.
Ngaphandle kwalokhu, awuyi kwamkela okanye uthengise izitokhwe okanye kubandakanya utshintshiselwano ngeBitcoin. Nangona kunjalo, umntu akafanelekanga ukuba akhathazeke njengoko lo mbandela unokuzinziswa kwaye awuzukusokolisa xa uzama ukuwulungisa. Ngaphambi kokuxoxa ngeendlela ezinokubakho zokulahla le micimbi, siza kuvavanya izizathu zoko I-Cash App ayikwazi ukungena ngemvume kwesi sixhobo .
Kutheni i-Cash App ingakwazi ukungena ngemvume kwesi sixhobo
• Ukungena okuseleyo kwiakhawunti kwizixhobo ezahlukeneyo ngaxeshanye sesona sizathu sokungena kwimicimbi yokungena kweCash.
• Ukusebenzisa i-Wi-Fi yoluntu (imodeli - i-bistro, iMall) enobungozi nako kunokufaka impazamo enxulumene nokungena.
• Ukusetyenziswa gwenxa kwayo nayiphi na imigangatho yeCash App nako kunokukuthintela ekungeneni ngemvume.
Ukusebenzisa i-VPN okanye enye indawo yokulandela izixhobo zokufihla kunye nokusetyenziswa kwenyani kuyathandabuzeka kwaye kuyathandabuzeka. Kungenxa yoko le nto, ngamanye amaxesha, i-Cash App iqinisekisa ukhuseleko lwabathengi, iyala ukungena.
Uyilungisa njani imicimbi yokungena kweCash App?
Kukho izinto eziqinisekileyo onokuzama ukuzenza lungisa imiba yemiqondiso yeCash App . Nalu uluhlu lwamacebo aluncedo.
pc boot kathathu mac windows ubuntu
• Ukuba awukwazi ukungena kwirekhodi yakho, uzama ukungena ngemvume kwizixhobo ezahlukeneyo ngaphandle kokungena kwixa elidlulileyo. Kule meko, uyakhuthazwa ukuba uphume kwi-Cash App kuzo zonke igajethi.
Zama ukuba ungasebenzisi umbutho woluntu wewebhu ukungena kwiakhawunti yakho yeCash App, njengoko unokuqhathwa ngokufanelekileyo apho.
• Qiniseka ukuba awophuli nayiphi na imiqathango yeCash App njengoko inokukuthintela ekungeneni ungene kwirekhodi yakho.
Ucinga ukuba usebenzisa nayiphi na iVPN okanye nasiphi na isixhobo, kuya kufuneka ukuba usithintele ngaphambili kuba oko kunokuba kukuguqula kube yimicimbi yokungena.
• Zama ukungasebenzisi amajoyini ayoyikisayo. Malunga nalapho, awuyi kuvunyelwa ukuba ungene.
• Thatha ukuhlaba usebenzisa ulungelelwaniso lwakutshanje lweCash App ukulungiselela umba wokuhlangana simahla.
Imephu zikaGoogle iimpazamo zeJavacript api: apinotactivatedmaperror
dibanisa okanye thabatha ipython
Yiza nomshicileli wobhuti kwi-intanethi
intwasahlobo yokuqalisa vs iflask
www imeyile aol ngophawu
istokhwe samahhala senkonzo yewebhu